Ny tokony hatao isan’andro, rehefa manadio tarehy…
Ny hiarovana ny tanana tsy ho simban’ny hatsiaka
Marefo ny hodi-tanana rehefa mangatsiaka tahaka izao ny andro. Tsy maintsy atao foana mantsy ny asa aman-draharaha, na eo aza ny fanala sy ny rivotra mangatsiaka. Tsy azo atao anefa ny mionona fotsiny amin’izany.
Averimberina foana fa dingana iray tena lehibe amin’ny fikoloana endrika ny fanaovana « démaquillage » na ny fanadiovana tarehy indroa isan’andro.
Tsy fanesorana ny haingo natao tamin’ny tarehy fotsiny mantsy no dikan’izy io, fa fanadiovana ny hodi-tava, na dia tsy nanao « maquillage » akory aza. Misy fitsipika 4 tokony arahina, mba ho lavorary ny fanatanterahana azy.
1-Ny akora ampiasaina
Raha toa ka matavy ny hoditra, dia ireo akora miendrika menaka ihany koa no tena tsara ampiasaina, satria ireny no mahavita mifaoka tsara ny menaka avoakan’ny hoditra. Raha toa ka makina ny hoditra, dia ireo miendrika “lait”, na “crème” no safidio, satria ireny no miaro ny hoditra tsy ho maina. Raha toa moa ka ara-dalàna ny hodi-tava, dia mety avokoa ny akora rehetra. Etsy an-daniny, isan’ny mandaitra, sady tsy manahirana, ny “lingettes démaquillantes”, izay sady azo entina mandehandeha ihany koa.
2-Ny fihetsika atao
Tsara tadidiana lalandava, fa taova marefo ny hoditra ka tsy tokony hosetrasetraina. Tsy kosehina mafy be, noho izany ny tarehy rehefa manao “démaquillage”, fa safoina moramora fotsiny. Inty misy fihetsika tsara ampiharina : hafanaina ao anaty felan-tanana izay akora “démaquillant” nosafidianao. Raha efa izay, dia ahosotra amin’ny tarehy, somary orina kely moramora. Aorian’izay, apetraka manarona ny tarehy ireo felan-tanana roa ary ingaina, toy ireny mitroka ny hodi-tava ireny ny tanana, mba hanaraka ny loto. Azo averina in-telo eo ho eo izay fihetsika somary mitroka izay. Ny ambin’ny loto sy “maquillage” mbola tavela kosa dia faohana moramora amin’ny vovon-dandihazo.
3-Ny fotoana hanaovana azy
Na nanao “maquillage” nandritra ny tontolo andro na tsia, dia tena tokony hatao fahazarana ny manao “démaquillage”, isa-kariva rehefa tonga ao an-trano. Io no isan’ny fomba fototra hahafahana mitazona ny hatsaran’ny hoditra, misoroka ny fipoiran’ny mony ary koa ny kentrona, izay maha-antitra aloha loatra.
4-Ny aorian’ny “démaquillage”
Rehefa afaky ny akora “démaquillant” ny haingon-tava sy ny loto dia tsy maintsy hamandinina ho fiarovana an’ilay hoditra. Iny menaka manamandina iny indray dia tokony hamaly ny hetahetan’ny hoditrao. Raha amin’ny alina dia afaka manosotra « crème de nuit », na maska fitondra matory.